निर्देशकको रुचि को द्वन्द्व | Law & More B.V.
ब्लग » निर्देशकको रुचि को द्वन्द्व
कम्पनीका निर्देशकहरू सँधै कम्पनीको चासो अनुरूप निर्देशित हुनुपर्दछ। यदि निर्देशकहरूले आफ्नै व्यक्तिगत रुचिहरू समावेश गर्ने निर्णयहरू गर्नुपर्दछ भने के गर्ने? यस्तो रुचि के हुन्छ र त्यस्तो अवस्थामा निर्देशकले के गर्ने अपेक्षा गर्छ?
रुचिको द्वन्द्व कहिले हुन्छ?
कम्पनी प्रबन्ध गर्दा, बोर्ड कहिलेकाँही निर्णय लिन सक्छ कि यो पनि एक विशिष्ट निर्देशक को एक लाभ प्रदान गर्दछ। निर्देशकको रूपमा तपाईले कम्पनीको चासो राख्नु पर्छ तपाईको आफ्नै व्यक्तिगत चासो (हरू) लाई होइन। त्यहाँ कुनै तत्काल समस्या छैन यदि व्यवस्थापन बोर्ड द्वारा लिईएको निर्णयले एक निर्देशकको व्यक्तिगत रूपमा फाइदा लिन्छ। यो फरक हो यदि यो व्यक्तिगत चासो कम्पनीको चासो संग टकराव हुन्छ। त्यो अवस्थामा, निर्देशक बैठक र निर्णय लिन मा भाग नलिन सक्छ।
ब्रुयल केसमा सर्वोच्च अदालतले निर्णय दियो कि त्यहाँ ब्याजको द्वन्द्व छ यदि निर्देशकले कम्पनी र यसको सम्बद्ध उद्यमको हितको रक्षा गर्न असमर्थ छ कि पूर्णांक र निष्पक्ष निर्देशकले त्यसो गर्न सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। व्यक्तिगत रुचि वा अन्य चासोको उपस्थिति जुन कानुनी संस्थाको समानतामा छैन।  ब्याजको द्वन्द्व छ कि छैन भन्ने कुरा निर्धारणमा केसको सबै सम्बन्धित परिस्थितिहरूलाई ध्यानमा राख्नु पर्छ।
निर्देशकले विभिन्न क्षमताहरूमा कार्य गर्दा रुचिको गुणात्मक द्वन्द्व हुन्छ। यो केस हो, उदाहरणका लागि, जब कुनै कम्पनीको निर्देशक एकै समयमा कम्पनीको समकक्ष हुन्छ किनकि ऊ अर्को कानुनी संस्थाको निर्देशक पनि हो। निर्देशकले त्यसपछि धेरै (विरोधाभासी) चासोहरूको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्दछ। यदि एक शुद्ध गुणात्मक रुचि छ, ब्याज ब्याज नियमको द्वन्दले ढाक्दैन। यो केस हो यदि ब्याज निर्देशकको व्यक्तिगत चासोसँग मिल्दैन। यसको एउटा उदाहरण हो जब दुई समूह कम्पनीहरूले सम्झौता गर्छन्। यदि निर्देशक दुबै कम्पनीहरूको निर्देशक हो, तर (n) (अप्रत्यक्ष) सेयर होल्डर होईन वा अर्को व्यक्तिगत चासो छैन भने त्यहाँ ब्याजको गुणात्मक द्वन्द्व हुँदैन।
चासोको द्वन्दको उपस्थितिको परिणाम के हुन सक्छ?
ब्याजको एक द्वन्द्व भएको परिणाम अब डच नागरिक संहितामा राखिएको छ। निर्देशकले छलफल वा निर्णयमा भाग लिन सक्दैन यदि ऊसँग सीधा वा अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत चासो छ कि कम्पनी र यससँग सम्बद्ध उद्यमको हित संग टकराउँछ। परिणाम स्वरूप कुनै बोर्डको निर्णय लिन सकिने छैन भने यो निर्णय पर्यवेक्षी बोर्डबाट पुग्ने छ। पर्यवेक्षी बोर्डको अनुपस्थितिमा विधानले अन्यथा व्यवस्था नगरेसम्म साधारण सभाले निर्णय लिनेछ। यो प्रावधान सार्वजनिक सीमित कम्पनी (NV) को लागी खण्ड २: १२ para अनुच्छेद and र निजी सीमित कम्पनी (BV) को लागि डच सिभिल कोडको २: २ 2। अनुच्छेद in मा समावेश गरिएको छ।
यो यी लेखहरुबाट निष्कर्ष निकाल्न सकिदैन कि यस्तो चासोको द्वन्द्वको केवल उपस्थिति एक निर्देशकको लागि जिम्मेदार छ। न त उनलाई त्यस्तो अवस्थाको लागि जिम्मेवार ठहराउन सकिन्छ। लेखहरूले केवल यो शर्त गर्दछ कि निर्देशकले छलफल र निर्णय प्रक्रियामा भाग लिनबाट अलग रहनु पर्छ। तसर्थ यो आचार संहिता होईन जुन सजाय वा रूचिको टु of्गोमा रोकथाम निम्त्याउँदछ, तर केवल आचार संहिताले यो निर्देशित गर्दछ कि निर्देशकले कसरी व्यवहार गर्नुपर्दछ जब ब्याजको द्वन्द्व रहेको छ। छलफल र निर्णय लिने कार्यमा सहभागिता निषेधले सम्बन्धित निर्देशकले मतदान नगर्न सक्छ भन्ने कुराको स .्केत गर्छ, तर बोर्ड बैठक वा एजेन्डामा वस्तुको परिचय हुनु अघि बोर्डको सूचनाको लागि अनुरोध गर्न सकिन्छ। यी लेखहरूको उल्ल of्घनले, तथापि, डच सिविल कोडको धारा १ को उप-ए २ को अनुच्छेद २:१:2 अनुरूपको संकल्पलाई शून्य र शून्यता प्रदान गर्दछ। यस लेखले भन्यो कि यदि निर्णयहरू गठन गर्ने प्रावधानसँग द्वन्द्वमा छ भने निर्णयहरू अयोग्य हुन्छन्। प्रावधान रद्द गर्न को लागी कारबाही को लागी हुन सक्छ जो प्रावधान को पालना मा उचित चासो छ।
यो लागु त्याग्ने कर्तव्य मात्र होईन। निर्देशकले समय समयमा व्यवस्थापन बोर्डमा लिने निर्णयमा चासोको सम्भावित द्वन्द्वको बारेमा जानकारी पनि प्रदान गर्नेछ। यसबाहेक, यो डच नागरिक संहिताको धारा २: from बाट पछि आएको छ कि ब्याजको द्वन्द्व पनि शेयरधारकहरूको साधारण बैठकमा सूचित गर्नुपर्दछ। यद्यपि कानूनले स्पष्ट रूपमा बताउँदैन कि जब रिपोर्ट गर्ने दायित्व पूरा भयो। तसर्थ यो सुझावहरु को लागी कानुन वा अन्यत्र यो प्रभाव गर्न को लागी एक प्रावधान को समावेश गर्न। यी कानूनहरूको साथ व्यवस्थापकको अभिप्राय व्यक्तिगत रुचिबाट प्रभावित हुने निर्देशकको जोखिमको बिरूद्ध कम्पनीलाई सुरक्षित राख्नु हो। त्यस्ता रूचिहरूले कम्पनीले नोक्सान भोग्ने जोखिम बढाउँछन् डच नागरिक संहिताको सेक्शन २: - जसले निर्देशकहरूको आन्तरिक दायित्व विनियमित गर्दछ - उच्च सीमाको अधीनमा छ। निर्देशकहरू मात्र गम्भीर दोषपूर्ण आचरणको मामिलामा जिम्मेवार हुन्छन्। ब्याज नियमहरूको कानूनी वा वैधानिक द्वन्द्वको पालना गर्न असफलता गम्भीर अवस्था हो जुन सिद्धान्तमा निर्देशकहरूको दायित्व हुन्छ। एक विवादास्पद निर्देशक गम्भीर रूपमा व्यक्तिगत निन्दा गर्न सकिन्छ र सिद्धान्तमा कम्पनी द्वारा उत्तरदायी मान्न सकिन्छ।
ब्याज नियमको संशोधित द्वन्द्व भएदेखि सामान्य प्रतिनिधित्व नियमहरू त्यस्ता अवस्थाहरूमा लागू हुन्छन्। डच नागरिक संहिताको सेक्सन २: १ 2० र २: २130० यस सम्बन्धमा विशेष महत्त्वपूर्ण छन्। अर्कोतर्फ, एक निर्देशक जसले ब्याज नियमको द्वन्द्वको आधारमा छलफल र निर्णय लिने कार्यमा भाग लिन अनुमति दिदैन, त्यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने कानूनी ऐनमा कम्पनीको प्रतिनिधित्व गर्न अधिकृत छ। पुरानो कानून अन्तर्गत, ब्याजको द्वन्द्वले प्रतिनिधित्वको शक्तिमा प्रतिबन्ध लगायो: त्यो निर्देशकलाई कम्पनीको प्रतिनिधित्व गर्न अनुमति थिएन।
यदि निर्देशकको विरोधाभास चासो छ भने उसले सोचविचार र निर्णय लिनबाट अलग रहनु पर्छ। यो केस हो यदि उसको व्यक्तिगत चासो वा रुचि छ जुन कम्पनीको चासोसँग समानान्तरमा चल्दैन। यदि निर्देशकले त्याग्नु पर्ने दायित्वको पालना गरेन भने उसले कम्पनीले निर्देशकको रूपमा जिम्मेवार हुन सक्ने सम्भावना बढाउन सक्छ। यसका साथै, निर्णयलाई रद्द गर्न सक्दछ जोसँग त्यस्तो गर्नमा उचित रुचि छ। चासोको द्वन्द्व भए पनि, निर्देशकले अझै पनि कम्पनीको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दछ।
के तपाईंलाई ब्याजको द्वन्द छ कि भनेर निर्धारण गर्न गाह्रो लाग्छ? वा के तपाइँ श in्कामा हुनुहुन्छ कि तपाइँले चासोको अस्तित्व खुलाउनु पर्छ र बोर्डलाई सूचित गर्नु पर्छ? कर्पोरेट कानून वकिललाई सोध्नुहोस् Law & More तपाईंलाई सूचित गर्न। सँगै हामी स्थिति र सम्भावनाहरू मूल्या assess्कन गर्न सक्छौं। यस विश्लेषणको आधारमा, हामी तपाईंलाई उपयुक्त अर्को चरणहरूमा सल्लाह दिन सक्दछौं। हामी तपाईंलाई कुनै पनि कार्यवाहीको समयमा सल्लाह र सहयोग प्रदान गर्न खुसी हुनेछौं।
 एचआर २ jun जुन २०० 1, NJ २००//2007२०; Jor 2007/169 (Bruil)
अघिल्लो पोस्ट स्थानान्तरण कर मा परिवर्तन: सुरु र लगानीकर्ता ध्यान!
अर्को पोस्ट यदि तपाईं आफ्नो भित्री दायित्व पूरा गर्न असमर्थ हुनुहुन्छ भने तपाईंले के गर्नुपर्छ?